Moringa Vitamin Burst Facial Treatment
The Clinic De Novo ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ
Blk A, No. 001, Corner of Hantharwadi Road and Hnin Si Street, Yuzana Highway Complex, (2.63 mi), Yangon.
Phone : 09 968 119995
Facebook Page : https://www.facebook.com/TheClinicDeNovo/
The Clinic De Novo ၏ အမှာစကား
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ The Clinic De Novo မှ ဖြစ်ပါတယ်။
The Clinic De Novo တွင် Moringa Vitamin Burst Facial ပြုလုပ်ခွင့်ရရှိမည့် ဆုအား ကံထူးရှင်(၃)ယောက် အတွက် မဲဖောက်ပေးမည် ဖြစ်ပါတယ်။ Moringa Vitamin Burst Facial ဖြစ်သည့် Vitamin A, C, E နှင့် Potassium ဓါတ် တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ သဘာဝ ဒန့်သလွန်သီး စစ်စစ် နဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင် လိုက်မယ်ဆိုရင် မောပန်းနေတဲ့ မျက်နှာ အသားရေလေး ချက်ချင်း ဆိုသလို အာဟာရ ဓါတ် ပြန်လည် ရရှိပြီး ကြည်လင်ဝင်းပ လာပါလိမ့်မယ်နော်။ ကံစမ်းပေးမှုအတွက် အားလုံးကို ကျေး ဇူး အထူး တင်ရှိပါတယ်။ ပါဝင်ကံစမ်းသော မိတ်ဆွေများကိုလည်း The Clinic De Novo မှ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
❀ Amazing Promotion for February မှ ကြိုဆိုပါတယ် ... ❀
Moringa Vitamin Burst Facial
Discounted Price: 24,500 MMK
Vitamin A, C, E နှင့် Potassium ဓါတ် တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ သဘာဝ ဒန့်သလွန်သီး စစ်စစ် နဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင် (Moringa Vitamin Burst Facial) လိုက်မယ်ဆိုရင် မောပန်းနေတဲ့မျက်နှာအသားရေလေး ချက်ချင်း ဆိုသလို အာဟာရ ဓါတ်ပြန်လည် ရရှိပြီး ကြည်လင် ဝင်းပ လာပါလိမ့်မယ်နော်။
Ionic Gold Facial
Discount Price: 24,500 MMK
Rich Anti-Oxidant and Anti-Inflammatory Properties Free Radicals ဖြစ်ပေါ်မှု နှင့် Collagen ဆုံးရှုံးမှု ကိုကာကွယ်ပေးပြီး သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေကာ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးပါတယ်။
Discount Price: 35,000 MMK
Fish Skin Collegan, Glycosaminoglycans, Melaclear2TM, Dermawhite, Anasemsy C, and Sodium Hyelourate ပေါင်းစပ်ပါဝင်မှုတို့ကြောင့် တစ်ကြိမ် Treatment ခံယူလိုက်ရုံနဲ့ အသားရေက တင်းတင်းလေးနဲ့ဖြူဝင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို စိန်လိုဝင်း တဲ့အသားရေလေးရယူနိုင်ပြီပေါ့နော်။
VFR Acne Scar Treatment
Discount Price: 416,500 MMK (4 Times/600 shots)
၀ကျခွံအမာရှတျ ခြိုငျ့ခှကျတှကွေောငျ့ ကိုယျ့မကျြနှာက လကမ်ဘာကွီးလို့ဖွဈနလေို့ စိတျညဈမနတေော့နဲ့နျော။ အမာရှတျခြိုငျ့ခှကျမြားကို မကျြနှာ အသားအရနှေငျ့ တဈပွေးညီ ပွနျလညျပွညျ့တငျး လာအောငျ ကုသပွီး အမာရှတျကငျးတဲ့ အလှပိုငျရှငျလေး ဖွဈနိုငျပွီလေ။
Discount Price: 92,000 MMK
Idle for oily skin, blackheads, enlarged pores, dull skin and acne prone skin. မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို Carbon သုတ်လိမ်းပြီး လေဆာဖြင့် ကုသပေးခြင်းဖြင့် အရေပြားလွှာအတွင်းထဲမှ ဆဲလ်သေများ၊ ဆားဝက်ခြံ နှင့် အညစ်အကျေးများ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ချွေးပေါက်များကိုပြန်လည်ကျဉ်းစေပြီး အဆီအလွန်အကျွန်ထုပ်လုပ်မှုကို တားဆီးပေးသည့်အတွက် ဝက်ခြံထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ Collagen ထုပ်လုပ်မှုကို လှုံဆော်ပေးသည့်အတွက် အသားရေတင်းရင်းပြီးအရွယ်တင်နုပျိုစေပါတယ်ရှင်။
Discount Price: ပြုလုပ်မည့် Area ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်း ကွာခြားမှု ရှိပါတယ်။ အမွှေးအမျှင်များကို နာကျင်မှုမရှိစေဘဲ ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို ကြမ်းတမ်းမှုမဖြစ်စေဘဲနူးညံချောမွေ့စေ ပါတယ်။ အမွှေးပေါက်နှုန်းနှေးသွားပြီး အမွှေးကြမ်းများ ထပ်မပေါက်တော့အောင် ကာကွယ်တားဆီး ပေးပါတယ်ရှင်။
❀ မိမိကိုယ်ကို လှအောင်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် မိမိအတွက်သာဖြစ်သည် ❀
Filler ထိုးမယ် ကြိုးထိုးမယ် လို့စဉ်းစားနေပြီဆိုရင် ကျွမ်းကျင် Aestheticians ဆရာဝန်များကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် The Clinic De Novo ကိုသာ ယုံယုံကြည်ကြည် ကြွလမ်းခဲ့ပါနော် ...
3D FACE RESHAPING TREATMENT
1) Nose Reshaping (နှာတံ ပုံဖော်ခြင်း)
2) Chin Reshaping (မေးစေ့ ပုံဖော်ခြင်း)
3) Cheek Reshaping (ပါးရိုး ပုံဖော်ခြင်း)
4) Jaw Reshaping (မေးရိုး ပုံဖော်ခြင်း)
5) Lip Reshaping (နှုတ်ခမ်း ပုံဖော်ခြင်း)
(NO SURGERY NEEDED! - NO DOWNTIME! - EFFECTIVE RESULT!)
အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်း ပေါ်မှုတည်၍ ဈေးနှုန်းအစားစားရှိပါသောကြောင့် စိတ်ဝင်စားသူများ ဖုန်း သို့မဟုတ် message box မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ ဇရာကိုအံတုဖို့ The Clinic De Novo သို့ ကြွလှမ်းခဲ့ပါရှင်။
❀ မျက်နှာပေါ်ကအမွှေးအမျှင်တွေကြောင့် အလှမပေါ်လွင်လို့စိတ်ညစ်နေလား ❀
မျက်နှာပေါ်ကအမွှေးအမျှင်တွေကြောင့် အလှမပေါ်လွင်လို့စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင် ... နေ့စဉ် နှုတ်ခမ်းမွှေးရိတ်ဖို့ အချိန်တွေပေးနေရတယ်ဆိုရင် ... Waxing လုပ်လဲအမွှေးကြမ်းတွေပဲ ပြန်ထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အရမ်းလန်းတဲ့ Make Up Artist Jessica Han ရဲ့ Video File လေးကိုတစ်ချက်လောက်ရှိုးကြည့်လိုက်ကြပါနော် ...
IPL Therapy နဲ့ Nd Yag Laser Treatment ရဲ့အကျိုးရလဒ် :
- နာကျင်မှုမရှိစေဘဲ ဖယ်ရှားပေးခြင်း
- အမွှေးအမျှင်များဖယ်ရှားပြီး နောက် အသားအရေကို ကြမ်းတမ်းမှုမဖြစ်စေဘဲနူးညံချောမွေ့စေခြင်း
- အမွှေးပေါက်နှုန်းနှေးသွားပြီး အမွှေးကြမ်းများထပ်မပေါက်တော့အောင် ကာကွယ်တားဆီးပေးခြင်း
Face (Forehead, Mono Eye Brows, Cheeks, Moustache, Jaw Line, Chin, Neck, Ears)
Body (Arms, Shoulder, Chest, Back, Legs, Bikini Line, Brazilian, Feet, Toes)
The Clinic De Novo ရဲ့ Hair Removal Treatment လေးတွေ ကို ခံယူရင်း မလိုချင်တဲ့ အမွှေးကြမ်းတွေကို ရာသက်ပန် “Bye Bye” လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်ရအောင်နော်…
ပြုလုပ်မည့် Area ပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမည့်အကြိမ်ရေနှင့် ဈေးနှုန်း ကွာခြားနိုင်ပါသောကြောင့် အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် ဇရာကိုအံတုဖို့ The Clinic De Novo သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။
❀ မျက်နှာနှင့်အရေပြားအလှအပအတွက် လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ❀
မျက်နှာနှင့်အရေပြားအလှအပနှင့်ပတ်သတ်၍ The Clinic De Novo မှ
၁။ မျက်ရစ်ဖော်ခြင်း (Double Eyelid Formation)
၂။ မျက်ကွင်းအဆီထုတ်ခြင်း (Eye Bag Removal)
၃။ မျက်နှာအသားအရေလျော့ချခြင်းအားပြုပြင်ခြင်း (Face lifting)
၄။ နှာတံပြုပြင်ခြင်း (Nose Reshaping)
၅။ မေးစေ့ပြုပြင်ပေးခြင်း (Chin Reshaping)
စသည့် အလှအပ ပြုပြင်မှုများကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဆရာဝန်ကြီး Dr. Kyi Chan Ko, M.B.B.S (UMM,Mandalay),Ph.D (TMDU,Tokyo), Member of Japanese Society of Aesthetic Dermatology, Member of Japanese Society of Aesthetic Surgery မှ ၁၀၀ % အာမခံချက်ဖြင့် ကုသပေးနေပါပြီ။
ကုသမှုခံယူပြီးသောသူများအားလည်း ရက်ချိန်းပြည့်သော နေ့ တွေမှာ follow up ပြန်ခေါ်ကာ ဆရာဝန်ကြီးနှင့် The Clinic De Novo မှ ဝန်ထမ်းများမှ အမြဲမပြတ်ဂရုစိုက်ပေးနေမှာ ဖြစ် တဲ့အတွက်ကြောင့် The Clinic De Novo ကိုအရောက်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေနော်။